Mukurangarira makore makumi maviri nemashunu pamwe nekutura bhuku renduri rakanhadzurudzwa raimbodaidzwa kuti Collections(Bakwa)1998 iro rakapiwa zita idzwa rokuti Traps (Miteyo)2015 iro rine nduri dzemadzimai eboka ravanyori reZimbabwe Women Writers.
Chiitiko chacho mumifananidzo.
Irene Staunton nanhengo yeBhodhi yeZWW, Audrey Charamba 2015
Patience Tavengwa achiverenga kubva muna Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Sachigaro weBhodhi yeZWW, Mai Taona Mtshiya nemukokwa akakosha, Isabella Matambanadzo. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Shumirai Nanhanga pakuturwa kwebhuku renduri, Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Virginia Phiri achitaura rwendo rwakafambwa pamwe nerwaakafamba neZWW. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015